Wonke umuntu usebenzisa amalambu e-LED, Ziyini izinzuzo zawo?
Yini eholwayo? Igama eligcwele le-diode ekhanyayo yokukhanyisa i-LED .I-diode ekhanyayo yokukhanyisa uhlobo lwe-semiconductor engaguqula amandla kagesi abe amandla akhanyayo. Izinsimbi ezaziwa nsuku zonke ezifana nethusi nensimbi zingabaqhubi, kuyilapho ukhuni nenjoloba kungama-insulators. Izinto eziphakathi kwe-conduc ...
Izimiso, izici nethemba lokufaka isicelo samalambu okukhula kwezitshalo
Isidingo sokwengeza ukukhanya ku-Greenhouse Eminyakeni yamuva nje, ngokuqongelela nokukhula kokukhula kolwazi nobuchwepheshe, isibani sokukhula kwezitshalo, esithathwe njengophawu lobuchwepheshe besimanje kwezolimo eChina, siye sangena kancane kancane emkhakheni wombono . Nge ...
Kungani ukhetha ingilazi ye-quartz yethubhu yesibani se-ultraviolet?
Akuzona izindaba zokuthi imisebe ye-ultraviolet ingawabulala amagciwane, ingabonakala kuyo yonke indawo empilweni yethu yansuku zonke —— Izibhedlela, ama-laboratories, ngisho nasemakhaya abo, inqobo nje uma kunesidingo senzalo, isibani se-UV asisoze sangabikho. Isimiso se-ultraviolet isibani inzalo A ...
I-COVID-19 iphakamisa isidingo se-UVC
I-COVID-19 imise imisebenzi eminingi yezomnotho, futhi njengoba abantu beqala ukuzivumelanisa nokujwayelekile okusha, olunye lwezicelo zakudala seluphilile njengokuzalwa kabusha. Kukhanya kwe-ultraviolet (UV), futhi ikakhulukazi i-C-band (UVC) ebulala amagciwane ye-ultraviol ...